Ụlọ ọrụ na -ebubata ngwa ahịa China na ndị na -ebubata ya EVERGREEN
Na fim mba ụwa, ọchịchọ maka nnyefe ngwa ngwa na -eto site na narị otu narị, mana mmadụ ole na ole na -a attentiona ntị na mmetụta ọjọọ nke ihe mkpofu a na -enweghị ike imegharị emegharị na ala na gburugburu anyị.
Maka nke a, EPP ewepụtala akpa rọba nwere ike imegharị emegharị iji belata mbibi na -aga n'ihu na gburugburu ebe obibi. Enwere ike megharịa akpa anyị na-emegharị emegharị site na idobe ụlọ ahịa ma jigide ike siri ike yana arụmọrụ mgbapu. A na -ejikarị ha ebukọta ngwaahịa gas na ọkụ eletrik dịka ekwentị mkpanaaka.
Nke gara aga: Akpa akpa dị larịị
Osote: Ihe nkiri nkwakọ ngwaahịa Recyclable
Ewepụghị ala akpa/Plastic Food Packaging/Zip ...